Waa maxay durduriyaha iyo waa maxay shaqadiisu? | Forum Mobile
Waa maxay durduriyaha iyo waa maxay shaqadiisu?
Jose Albert | 09/05/2022 20:31 | La cusbooneysiiyay 13/05/2022 22:27 | Internet
Marka ay timaado abuurista waxyaabaha ku jira internetka, sannado badan waxay ku sii jireen fikradda caanka ah Bloggers, Vloggers iyo Podcasters. Marka la eego 2-da ugu dambeeya, marar badan waxay ku dhow yihiin isku mid, kaliya in ay nuxurka maqalka, badanaa waxaa lagu sii daayaa cod kaliya. Xaaladaha kale, abuuruhu wuxuu soo saaraa maqal kaliya. Laakin, dhamaantood waxay ka siman yihiin in waxa ku jira ay inta badan yihiin offline, taas oo ah, dib loo dhigay ama la qorsheeyay. Si kastaba ha ahaatee, sanadihii ugu dambeeyay waxay noqdeen kuwo aad caan u ah abuurayaasha online contentloo yaqaan streamers. Haddaba, maanta waxaynu u guntagi doonaa «waa maxay durduriyaha» iyo shaqadaadu maxay tahay.
Maadaama, sida shaqo kasta, ay leedahay fankeeda ama cilmigeeda, noqoshada a streamer guul, kaliya ma aha isticmaalka a kombiyuutar leh kamarad, makarafoon iyo xiriir internet oo gudbiya wax kasta, si kastaba ha ahaatee xiiso leh. Sababta sababta, maanta waxaan caddayn doonaa waxa ka dambeeya arrintan farshaxan online qabow oo casri ah.
Waa kuwee youtuber-ka Isbaanishka ugu caansan 2022?
Iyo sida caadiga ah, ka hor intaanan u gelin daabacaadan hadda taagan qodob aad u la xidhiidha abuurayaasha nuxurka warbaahinta, iyo si gaar ah oo ku saabsan «waa maxay durduriyaha», waxaan u dhaafi doonaa kuwa xiiseynaya isku xirka qaar ka mid ah our qoraallo hore oo la xiriira oo la mid ah. Si ay si sahal ah wax ugu qabtaan, haddii ay rabaan inay kordhiyaan ama xoojiyaan aqoontooda ku saabsan, dhammaadka akhrinta daabacaadan:
"Marka xigta, waxaan sheegi doonaa oo aan faahfaahin ka bixin doonaa qaar ka mid ah kuwa ugu horreeya liiska youtubers Isbaanish ee ugu fiican 2022". Waa kuwee youtuber-ka Isbaanishka ugu caansan 2022?
Sida loo daawado durdurro badan Twitch hal mar
1 Streamer: waa maxay iyo waxa ay qaadato in ay u shaqeeyaan sida mid ka mid ah?
1.1 Waa maxay durduriyaha?
1.2 Talooyin iyo hababka ugu fiican si aad u noqoto Streamer guul leh
1.2.3 Qalabka shaqada (qalabka)
1.2.3.1 Qalabka Guud
1.2.3.2 qalab gaar ah
1.2.4 Maareynta madal iyo qalab tafatir
1.2.4.2 qalabka software
1.2.5 Tayada si ay u noqdaan Streamer wanaagsan
Streamer: waa maxay iyo waxa ay qaadato in ay u shaqeeyaan sida mid ka mid ah?
Waa maxay durduriyaha?
Dad badan shaqooyinka iyo ganacsiga casriga ah Qaar badan, waxaa laga yaabaa inaysan u ahaan ama lahayn qeexitaan sax ah ama aan caddayn. Si kastaba ha ahaatee, sida aynu horeba ugu muujinnay ereyo fudud bilowgii, a Streamer waa uun a abuuraha nuxurka tooska ah ee qaab maqal-muuqaal ah iyada oo loo marayo madal gudbinta internetka. Iyo si loo dhamaystiro qeexitaankan, waxaanu ka tagi doonaa qeexida rasmiga ah ee shaqada ama ganacsiga ku jira kuwa caanka ah Wikipedia:
"Dheeriyaha, sidoo kale loo yaqaan soo saare toos ah, soo saare toos ah, mid toos ah ama mid toos ah, waa qof sameeya tabin toos ah ama dib loo dhigo. Gaadhida durduriyayaasha ayaa koray inay ku jiraan noocyo kala duwan oo u dhexeeya ciyaaraha fiidyaha, casharrada, ama xitaa wada sheekaysiga kali. "
Halka, beddelaad yar iyo qeexid faahfaahsan oo ku saabsan waxa dhabta ah ee shaqadiisu tahay, ay noqon karto kuwan soo socda:
"Waa hal-abuuraha nuxurka dhijitaalka ah ee leh awoodda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda si ay u fuliyaan baahinta tooska ah (waxyaabaha ku jira waqtiga dhabta ah) ee daawadayaasha gaarka ah, iyada oo loo marayo goobo gaar ah sida YouTube, Twitch, Facebook, iyo kuwo kale, inta badan ujeeddooyin macluumaad iyo madadaalada dhijitaalka ah.
Talooyin iyo hababka ugu fiican si aad u noqoto Streamer guul leh
Hadda in la durdureeyo waa hal shay iyo noqo mid guulaysta waa mid kale. Waxa la mid ah ganacsiyada la midka ah, sida, Bloggers, Vloggers (YouTubers) iyo Podcasters. Iyo inta kale ee xirfadaha iyo xirfadaha kale. Haddaba, hoos waxaan sahmin doonaa waxa ay u baahan tahay in la haysto oo la sameeyo si aad u noqoto mid guulaysata:
Raadi meel (mawduuc, goob, koox, ama bulsho) oo aan ku wanaagsannahay: Waxay noqon kartaa wax aad u muuqda, laakiin marar badan dadka qaar aad uma cadda waxa ay dhab ahaantii jecel yihiin ama waxay dhab ahaantii ku fiican yihiin. Haddaba, tani waa in ay noqotaa talaabadii ugu horeysay, oo ah in la caddeeyo waxa la baahinayo ( si toos ah loo baahin doono) iyo cidda loo gudbinayo nuxurka iyo haddii ay jirto baahi ama awood ku jirta, si aan wakhti looga lumin oo aan loo daahin. lacag. Marka la soo koobo, baadh dhowr suuq oo dhagaystayaal ah oo dooro midka aad ku fiicnaan karto.
Qaado tababar ama wakhti tababar si aad u wanaajiso aqoontaada maadada iyo xirfadaha wada xidhiidhka ka hor inta aanad bilaabin: Inkasta oo dabiicinimada iyo is-xakamaynta laga heli karo goobtan, sidoo kale waa run in ku-dhaqanku uu kaamil ka dhigo oo dareenka ugu horreeya ayaa badanaa muhiim ah. Sidaa darteed, waxaa lagula talinayaa ka dib waxii ugu horreeyay ee hore loogu taliyey, in la qaato waqti loogu talagalay hawlaha tababarka, sida: Kobcinta dhaqdhaqaaqyada, qaabka iyo codka, iyo dharka haddii loo baahdo, si aan u bilowno abuurista isgaarsiinta ugu fiican (af iyo afba) ee suurtogalka ah taageerayaasha iman kara.
Qalabka shaqada (qalabka)
Ku soo ururi kooxda ugu fiican meesha ugu macquulsan: Sida macquul ah oo cad, gudbinta macluumaadka internetka waxay u baahan tahay kaabayaal iyo qalab wanaagsan. Sidaa darteed, noqoshada qulqulka wanaagsan ama qulqulka guuleysta wuxuu ka bilaabmaa xaqiiqda ah inuu awoodo inuu ku xisaabtamo shuruudaha farsamada ee lagama maarmaanka ah si loo gudbiyo sawirada iyo codka tayada sare leh, iyada oo la fulinayo hawlo kale oo barbar socda. Sababtan awgeed, maalgashi hore ee walxahan soo socda ayaa dammaanad qaadi doona jawi shaqo oo wanaagsan oo soo jiidasho leh (dejinta) kuwa raacsan:
Kursiga Ergonomic: Si looga fogaado dhaawac soo gaara jirka, gaar ahaan laf dhabarta iyo murqaha.
Jiirka Ergonomic iyo kiiboodhka: Si aad uga fogaato dhaawac ama xirashada dhinaca gacmaha.
Taleefannada dhegaha lagu dhegeysto ee makarafoonka leh: Si aad u dhegaysato si sax ah oo tayo leh fariimaha iyo ogeysiisyada.
kamarad HD iyo duubitaan muuqaal ah: Si aad u ciyaarto gudbinta tayada wanaagsan.
Hal makarafoon aan jiho lahayn oo leh shaandhada hawada: Si loo helo tayada codka wanaagsan.
Isku xirka Internet-bandwidth-sare: Si loo taageero gudbinta maqalka iyo muuqaalka tayada sare leh. Isticmaalka fiber optics ayaa aad loogu talinayaa xawaaraha sare iyo heerarka amniga.
Meel wax lagu duubo oo raaxo leh oo shuruudaysan: Si looga fogaado carqaladeynta dadka, buuqa ama dhacdooyinka lama filaanka ah iyo dhacdooyinka soo noqnoqda. Oo goobtiisa iyo iftiimintoodu la jaanqaadaan nuxurka la gudbinayo.
Si kastaba ha noqotee, haddii Goobta shaqada la doortay waa mid ka mid ah ciyaaraha video, sababtoo ah sida cad ugu habboon ayaa noqon doona in loo isticmaalo qalab gaar ah ama qaybo gaar ah, sida:
kombuyuutar ciyaar: Iyada oo ku filan RAM, koodhadhka CPU iyo kaadhka sawirada ugu fiican (GPU) ee suurtogalka ah.
Jiirka ciyaaraha iyo kiiboodhka combo si sax ah, firfircooni iyo muuqaal weyn.
Agabka Ciyaaraha SareTusaale ahaan, xaqiiqada dhabta ah, la kordhiyay iyo kuwa isku dhafan.
Waxaa hubaal ah in waxaas oo dhami ay yihiin kuwo aan si fudud loo heli karin oo cidna isu geyn karto, balse waxaa lagu billaabi karaa sida ugu wanaagsan, iyadoo maanka lagu hayo in toddobaadyo ama bilo gudahood lagu heli karo oo ay habboon tahay in la helo. si aad u awoodo in aad naftada ugu hurto si xirfadaysan.
Sida loo mamnuuco isticmaalayaashaaga sunta ah ee Twitch
Maareynta madal iyo qalab tafatir
Dooro Platform + Software-ka ugu fiican: Doorashada iyo maaraynta goobta ku habboon baahintayada, iyo baahinta ugu fiican iyo software tafatirka muuqaalka, sida cad waa muhiim. Maaddaama, dhammaantood ay wadaagaan wax badan, laakiin waxay leeyihiin kala duwanaansho la taaban karo oo ku saabsan xeerarka, faa'iidooyinka, baaxadda iyo sahlan isticmaalka. Sababtan awgeed, waxaa lagu talinayaa in aad wax yar ka barato mid kasta oo ka mid ah goobaha jira iyo qalabka software ee la heli karo, si aad u bilowdo cagta midig, mid kasta oo iyaga ka mid ah. Iyo kuwa ugu caansan oo loo isticmaalo, labadaba Streamers, iyo abuurayaasha kale ee nuxurka warbaahintu waa:
Fur barnaamijka softiweerka (OBS)
Tayada si ay u noqdaan Streamer wanaagsan
Ku celceli oo gaadho cod wanaagsan.
Hayso caddaynta (soo noqnoqda) daabacaadda.
Bixi jadwal qoraal ah
Noqo mid dabiici ah oo asal ah intii suurtogal ah.
Iyo dabcan, karti badan.
Marka la soo koobo, isku day inaad Inaad noqoto daadiye guuleed waa hawl aad u culus, sida hal shaqo oo kale oo nolosha ah, taas oo u baahan dulqaad, dadaal, dareen, maalgashi iyo waxbarasho. Laakiin, farqi weyn ayaa ah in ay tahay hab weyn oo madadaalo leh oo aan caan ahayn oo kaliya, laakiin si aad u abuurto oo aad u hesho lacag badan. Sababtan awgeed, in ka badan shaqada, waa hab nololeed aad mashquul u ah, taas oo badan oo ka mid ah hal-abuurnimo, karti, karti-xirfadeed iyo agab tignoolajiyadeed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Internet » Waa maxay durduriyaha iyo waa maxay shaqadiisu?
Dhammaan koodhadhka Paladins iyo sida loo soo furto
emulators-yada ugu fiican ee PS3 ee Android